Kedu ihe kpatara ị ga-eji soro ndị na-eweta ngwa ngwa? | Martech Zone
Ọ bụ ihe ịma aka ịgwa ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ IT ma mee ka ha zụta ụdị ASP. Imirikiti ndị folks kwenyere na ọdịiche dị n'etiti ASP na ụlọ ọrụ sọftụwia kachasị dị na ya bụ na mmadụ na-ewepụta sọftụwia maka onye ahịa ya aka na nke ọzọ wepụtara na ntanetị ebe ngwa dị mfe iji debe.
Na-ele ụlọ ọrụ ahụ anya n'ụzọ a, ha abụọ dị ka ụlọ ọrụ ngwanrọ. Nke ahụ enweghị ike ịga n'ihu n'eziokwu - mana ọ siri ike ịkọwa ya na onye ọkachamara IT nwere ahụmahụ nke na-achọghị ịhapụ njikwa onye ọ bụla - n'agbanyeghị agbanyeghị ọrụ ha.
Kedu ihe bụ ASP?
Companieslọ ọrụ ngwanrọ na-emepụta ihe ngwanrọ. Ndị na-enye ndị na-eweta Ngwa bụ ndị mmekọ azụmaahịa na-enye ngwọta ngwanrọ. Onye na-ere sọftụwia nwere ike ịdabere na nkwado ahụhụ na atụmatụ ọhụrụ; ebe ASP nwere ike ịdabere na ịghọta ụlọ ọrụ ahụ, usoro ya, jikwaa ọganiihu ndị ahịa na uto ya, ma na-aga n'ihu na-ewepụta nkwuputa ma na-ejigide obere oge.
Emehiela ngwa sitere na ngwa weebụ maka ASP, ha abụọ dị nnọọ iche. Gmail bụ ngwa ntanetị weebụ. Google Office bụ ngwa eji arụ ọrụ weebụ. Enweghikwa 'oru' o bula nye onye ahia nke eji software. ASP na-enye akụrụngwa, ọrụ, ngwanrọ na nkwado.
Obi dị m ụtọ, onye aha ASPs ziri ezi - Ngwa Service Na-enye ihe. ASPs ezughi oke maka ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ maka nsogbu sọftụwia ọ bụla. Enwere ọtụtụ ngwanrọ ngwanrọ na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara karịa karịa na weebụ. Ngwa ndị chọrọ oke data ga-ebugharị n'etiti ndị ahịa na ihe nkesa bụ otu ihe atụ - bandwidth nwere ike ịbụ nkwụsị.
Ndị na-ahụ maka ngwa na-enye gị ndị ọrụ enyere aka na ndị ọkachamara n’ọrụ ha. ASPs matara otu sọftụwia jikọtara nke ọma na gburugburu azụmaahịa gị ma nyere aka mee ka nsonaazụ azụmaahịa gị tinye sọftụwia ahụ.
Ihe Nlereanya ASP: Onye Na-enye Ọrụ Email
Ezigbo ihe atụ nke ASP bụ ihe Email na-eweta ọrụ. Otu ụlọ ọrụ, dị ka Kpọmkwem Ngwaọrụ, nwere kediegwu ụlọ ọrụ ego:
Ndị ọrụ mgbapụta na-arụ ọrụ na ndị na-eweta ọrụ Internetntanetị iji hụ na email gị ezighi ezi dị ka SPAM ma kpalite ime gị aha ojii.
Ndị otu na-ahụ maka ngwaahịa na-enyocha usoro ụlọ ọrụ ma hụ na sọftụwia ha mepụtara email nke ndị ahịa email niile nwere ike ịlele.
Ndị otu njikwa akaụntụ nwere ike inyere gị aka n'ịmepụta email, ederede ederede, na ọrụ ndị ọzọ iji bulie nzaghachi.
Ndị otu njikọta na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa na ngwa na nyiwe dị iche iche. Ha na-enye ahụmịhe ka e mepụtara njikọta n'ụzọ ziri ezi na nke mbụ ya.
Mmepe ngwa nke na-akwado ụkpụrụ mmepe kachasị elu yana leverage teknụzụ na akụrụngwa ruo ike.
Ihe Nlereanya ọzọ: Ntuziaka Onlinentanetị
Na Industrylọ oriri na ọ Resụ Resụ Industrylọ oriri na ọ Resụ Resụ, e nwere ọtụtụ ndị na-ere ngwanrọ Onlinentanetị Online. Anyị nwere otu paradaịs ahụ na ndị IT iji mebie ASP ndị ahụ, ọtụtụ ndị ọkachamara IT nwere ahụmịhe ma nwee ahụ kwenyere na ọ nwere ike mejuputa ngwanrọ ọ bụla na mbara ala. Obi abụọ adịghị m na ha nwere ike - mana nka ha na ebido ma kwụsị ebe ngwanro bidoro ma gwụ.
Nsogbu dị na Restaurant Industry Online ịtụ ahịa bụ na ole na ole n'ime ha na-ele anya gabiga ụlọ ọrụ ahụ… ha edozila esemokwu nke otu esi enweta site na isi A ruo B ma mechie ụzọ. Inweta iwu site na ntaneti n'ime a naa bụ akụkụ dị mfe. Ozugbo i nwere ike ime nke ahụ, ị ​​'na-azụ ahịa'. Akụkụ ndị siri ike, soro ezie:
Zingtụle ihe eji arụ ọrụ, ndakọrịta, ojiji na ịbawanye njirimara nke ọrụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị elu ma belata ọnụego agbahapụ.
Inye mmụba maka iwu na njehie n'ihi ọpụpụ, nsogbu POS, nsogbu menu, nsogbu njikọta, nsogbu ịkwụ ụgwọ, wdg. Otu usoro furu efu bụ ọdachi ebe ọ bụ na ị ga - enweta otu ohere na onye na - ahụ maka ntanetị iji mee ya.
Ulo oru nlekota oru iji nye teknụzụ ziri ezi na omume kacha mma maka nnabata ọhụụ na nnabata nchekwa dị mkpa. Iwu teba maka ekwentị bụ nnukwu akụkọ na ụlọ ọrụ ugbu a. Olee otú ọtụtụ ndị ị nyere iwu a Pizza site SMS? Ee, echere m ya.
Njikọ aka na nchịkọta, sistemụ njikwa ọdịnaya, Mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ kwa, ịre ahịa email na ngwa ahịa ndị ọzọ dị mkpa maka ikpo okwu ecommerce ọ bụla. Ndi ‘software’ gi n’eme gi? Nope. Mana ASP gi kwesiri ibu.
Achọrọ ASP iji meziwanye ma tinye ego
Ndị ASP gbara ha gburugburu were onyinye kacha mma n'ahịa, ma ha arụkwala ngwa ga-enyere ha aka ị nweta akụrụngwa NA ọrụ iji nye nsonaazụ kacha mma. ASPs na - aga ije na ihe ịga nke ọma ha na - aga nke ọma na azụmaahịa gị.
Otu uru ikpeazụ ndị ASP nwere, bụ n'ezie bụ ụzọ esi akwụ ụgwọ maka sọftụwia ha. ASP na-enyekarị usoro ndebanye aha ebe ndị na-eweta sọftụwia na-enye ụdị ikikere. Kedu ihe dị iche? Buy na-azụta sọftụwia ahụ ma mee ya. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ọ bụkarịrị ọgbakọ gị ime ka ọ rụọ ọrụ. Jisie ike! Na ASPs ị na - ejikarị agbazi sọftụwia wee kwụọ ụgwọ maka ojiji ya.
ASP na-enye ndị ahịa ahịa, ọ bụghị ngwa ahụ
Site na azụmaahịa azụmaahịa, nke a na-enye azụmaahịa na ntinye ego dị ukwuu karịa na ndị na-eweta ngwa ngwa karịa ụlọ ọrụ ngwanrọ. Nke a na-eme ka ndị ASP tinye ego na nyocha na mmepe na teknụzụ zuru oke. Echiche ụgha na ASP bụ na ha na-abawanye uru. Ebe m rụchara ụfọdụ nnukwu ASP, enwere m ike ịkwado gị na uru ahụ dị na ụlọ ọrụ ngwanrọ.
Tags: chad pollittokoliUsoro iheomume nke Facebookgotowebinarinbound ahịa akwụkwọisa isakuno okikesteti email gharinjikerendị ahịa
Inweta na Bipụta ka dị jụụ!